About Me | Chu May Paing
အိမ်အ‌‌‌ဝေးမှ အိမ်များကြားက ဘ၀
ခြူးမေပိုင်သည် မနုဿဗေဒဘာသာရပ်ကို အထူးပြုလေ့လာနေသော ပါရဂူတန်းကျောင်းသူ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် အမေရိကန်နိူင်ငံ တက်ဆက်ပြည်နယ်တွင် အခြေချနေထိုင်နေသော မြန်မာပြည်ဖွား ‌ရွှေ့ပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူ အမေရိကန်နိူင်ငံသား ဖြစ်ပါသည်။
လူမျိုးရေး ယဥ်ကျေးမှုဆိုင်ရာများကို လေ့လာနေသောသူတစ်‌ယောက်အနေဖြင့် ခြူးသည် လူများ၏ ဘ၀ဇာတ်‌ကြောင်းများကို အထူးတလည် စိတ်၀င်စားသည်။ မြန်မာစကားအဆိုအရ လူများ ကျဥ်လည်ရာ ဘ၀သည် ဇာတ်ခုံတစ်ခုကဲ့သို့ ခိုင်းနှိုင်းပါက လူတိုင်းမှာ ‌တင်ပြစရာ ဇာတ်လမ်းကိုယ်စီ ရှိနိူင်သည်လို့ ခြူးက ယုံကြည်သည်။ စာရေးဆရာတစ်ဖြစ်လည် မနုဿဗေဒပညာရှင်တစ်‌‌‌ယောက်အနေဖြင့် ထိုဇာတ်လမ်းများကို မိမိ၏ ရှုထောင့်ကနေ မည်သို့မည်ပုံ တင်ပြမလဲဆိုတာကို ခြူး စဥ်းစားသည်။
မြန်မာနိူင်ငံ ရန်ကုန်မြို့တွင် မွေးဖွားကြီးပြင်းလာခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင် ပြည်ပရောက် မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်အနေဖြင့် ခြူးသည် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မြန်မာနိူင်ငံမှ အခြားအရပ်ဒေသတွေသို့ ပြောင်းရွှေ့အခြေချနေထိုင်ကြသော လူတွေ၏ စိတ်ခံစားချက်များ၊ ရင်းနှီးပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုများနှင့် ဖြစ်တည်မှုများကို အထူးစိတ်ဝင်စားသည်။ လက်ရှိတွင်၄င်းအချက်များကို သူမကိုယ်တိုင် တွေ့ကြုံခံစားမှုကနေ အခြေတည်ပြီး လေ့လာနေသည်။
ခြူးသည် လက်ရှိ မြန်မာနိူင်ငံနှင့် ပတ်သက်သော ဒစ်ဂျစ်တယ် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများသည် လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာများကို အသုံးပြုပြီး စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို မည်သို့ တော်လှန်နေသလဲဆိုသည့် အကြောင်းကို သုတေသနပြုလေ့လာနေသည်။ ခြူး၏ သုတေသနတွင် ပါဝင်ချင်သော်၄င်း လက်တွဲပြုလုပ်ချင်သော်၄င်း အီးမေးလ်မှတဆင့် ဆက်သွယ်နိူင်ပါသည်။
ဖီမီနင့် (သို့) အမျိုးသမီး၀ါဒကို လက်ကိုင်ထားသူတစ်‌ယောက်အနေနှင့် ခြူးသည် ပုဂ္ဂိုလ်‌ရေးဖြစ်တည်မှုများသည် နိူင်ငံရေးဖြစ်တည်မှုများသာ ဖြစ်သည်လို့ ယုံကြည်သည်။ ခြူးသည် လူတစ်ယောက်ဖြစ်ရခြင်းမှာ အချိန်ကာလအလျောက် ပြောင်းလဲမှုများ၊ နင့်နင့်နဲနဲ ခံစားချက်များနှင့် ရွေ့လျားနေသော အရာဝတ္တုများနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေမှုများကို လေ့လာစစ်ကြောချင်သည်။ သူမ၏ ဗမာ ဗုဒ္ဓဘာသာနောက်ခံကို အမြဲတစေ စေ‌ကြောလေ့ရှိပြီး ကျန်သောအချိန်များတွင် သုတေသနနှင့် ပညာရေးမှာ ဘာကြောင့် လူဖြူများသာ စိုးမိုးနေသလဲဆိုသော အကြောင်းများကို ပုံမှန်စာရေးလေ့ရှိပါသည်။
မြန်မာစကားအရ ခြူးဆိုသည်ကို ကနုတ်ပန်း၊ ပိုက်ဆံခြူးပြား၊ လည်ဆံဖွား ခြင်္သေ့ ဆိုပြီး အဓိပ္ပါယ် ၃ မျိုး ဖွင့်ဆိုသည်အနက် ခြူးက ခွန်အား၊ ကိုယ့်အားကိုယ်စွမ်းနိူင်မှုနှင့် ရဲရင့်မှုတို့ကို သရုပ်ဖော်သောအနေဖြင့်
နောက်ဆုံး အဓိပ္ပါယ် လည်ဆံဖွား ခြင်္သေ့ ကို နာမည်သညာယူပါသည်။
Social Media Committee Lead
Literacy Practicum Program
Council of American Overseas Research Center Inya Institute Pre-dissertation Research Grant
Southeast Asian Research Group Pre-dissertation Research Grant
Diversity, Equity, and Community Fellowship
CU Engage Arts and Humanities Fellowship
1350 Pleasant St, 233 UCB
Chu May Paing & Than Toe Aung (2021) Talking back to white "Burma Experts."
Chu May Paing (2020) In Need of Daughters of Good Lineage: Placing Gender in Myanmar's Buddhist Nationalist Discourse. Journal of Southeast Asian Linguistics Society. Special Issue.
Chu May Paing (2020) Viral Satire as Public Feeling in Myanmar. In "Pandemic Diaries: Affect and Crisis," Carla Jones (ed). American Ethnologist Website. May 20 2020.
Chu May Paing (2018) To KnowaBatha: Family Language Soicalization among Burmese Buddhist Immigrant Families in New York City. Journal of Southeast Asian American Education and Advancement 13 (1).